Tenga Kushamisika Raki Bhegi - Kutakura Mahara & Hapana Mutero | WoopShop®
Kushamisika Raki Bhegi
Kushamisika Raki Bhegi yakadzoserwa kumashure uye inotakura nekukurumidza painongodzoka muchitoro.
Wana chipo chakakosha uye chemhando yepamusoro chinobatsira!
WoopShop: Iyo Yekupedzisira Saiti Yekutenga PamhepoKana iwe uchida kuona zvakanakisa zvepamhepo zvekutenga zvevarume, vakadzi, uye vana, iwe uri munzvimbo chaiyo. WoopShop ndiyo yekupedzisira nzvimbo yemafashoni uye mararamiro ehupenyu, kuve unogashirwa kune yakawanda zvinhu zvekutengesa zvinosanganisira zvipfeko, shangu, zvishongedzo, zvishongo, zvigadzirwa zvekuchengetedza zvemunhu uye nezvimwe. Ino inguva yekutsanangudza zvakare yako chirevo nesitore-trove yezvinhu zvine fashoni. Chitoro chedu chepamhepo chinounza iwe zvazvazvino muzvigadzirwa zvemugadziri zvakanangana nedzimba dzemafashoni. Unogona kutenga pamhepo paWoopShop kubva kunyaradzo yeimba yako uye uwane ako aunofarira kuendeswa kusvika pasuo rako chaipo. mashandiro evarume, vakadzi, uye vana. Iwe unozoona kuti denga ndiro muganho kana zvasvika pamhando dzezvipfeko zvaunogona kutenga kuzviitiko zvakasiyana.Smart zvipfeko zvevarume - PaWoopShop iwe unowana zviuru zvisarudzo mune akangwara akarongeka mashati uye mudhebhe, anotonhorera T-shirts uye majean, kana kurta uye pajama mubatanidzwa wevarume. Pfeka chimiro chako nemaT-shirts akadhindwa. Gadzira back-to-campus vibe ine varsity T-shirts uye inoshungurudzika jeans. Ngazvive gingham, nyati kana hwindo-pane dhizaini, mahembe akatariswa akachenjera zvisingaite. Vabatanidze pamwe nema chinos, akavharirwa majee kana bhurukwa rakabvaruka kuti vataridzike zvakanaka. Sarudza yekushongedzwa yakashongedzwa yakatarwa nemabhachi ebikiki. Tungamira kunze kune makore ekunze neushingi mumajeti asingadziviriri mvura. Bhurawuza kuburikidza nechikamu chedu chemukati chemukati kuti uwane zvipfeko zvinotsigira izvo zvinogona kukuchengetedza uine chivimbo mune chero chipfeko. Terendy zvipfeko zvevakadzi - Kutenga pamhepo kwevakadzi paWoopShop chiitiko chinosimudzira. Tarisa hudyu uye ugare wakasununguka nema chinos uye akadhindwa zvikabudura zhizha rino. Tarisa kupisa pazuva rako wakapfeka mune diki dhirezi diki, kana sarudza tsvuku madhirezi eiyo sassy vibe. Madhirezi ane mitsetse uye T-shirts anomiririra mweya wekare wemhando yefashoni. Sarudza ako aunoda kubva pakati peBardot, off-bendekete, shati-dhizaini, blouson, yakashongedzwa uye peplum misoro, kutumidza mashoma. Vabatanidze pamwe neakaonda-anokodzera majini, masiketi kana palazzos. Kurtis nejean zvinogadzira fusion-yekupfeka musanganiswa weiyo inotonhorera yedhorobha. Yedu mikuru saree uye lehenga-choli sarudzo dzakakwana kuita ratidziro pazviitiko zvakakura zvemagariro senge michato. Yedu salwar-kameez seti, kurtas uye masutu ePatiala anoita sarudzo dzakasununguka dzekupfeka zvakapfekwa. Shangu dzefashoni - Kunyange zvipfeko zvichigadzira murume, mhando yeshangu dzaunopfeka dzinoratidza hunhu hwako. Tinokuunzira mutsara wakazara wesarudzo mushangu dzisina kujairika dzevarume senge shangu uye machira. Gadzira chirevo chemagetsi pabasa wakapfeka mabhurogi uye oxford. Dzidzira yako marathon neshangu dzekumhanya dzevarume nevakadzi. Sarudza shangu dzemitambo yega yega yakadai setenisi, nhabvu, basketball uye nezvimwe. Kana pinda munzira yakasarudzika uye nyaradzo inopihwa neshangu, inotsvedza, uye mafiripi. Ongorora mutsara wedu weshangu shangu dzevakadzi dzinosanganisira pombi, heeled bhutsu, wedge-zvitsitsinho, uye penzura-zvitsitsinho. Kana kunakirwa neakanakisa ekunyaradza uye masitayera ane yakashongedzwa uye esimbi mafurati.Stylish accessories - WoopShop ndeimwe yeakanakisa epamhepo ekushambadzira maseteti emakirasi echinyakare anonyatso kukwana ako hembe. Iwe unogona kusarudza smart analog kana dhijitari wachi uye woenzanisa ivo kumusoro nemabhanhire uye tayi. Tora mabhegi akapamhama, mabhegi, uye zvikwama kuti uchengetedze zvakakosha zvako muchitaera. Kunyangwe iwe uchida zvishoma zvishongo kana zvidimbu zvakakura uye zvinopenya, yedu yepamhepo zvishongo muunganidzwa inokupa iwe zvakawanda zvinonakidza sarudzo. Muchinda wako mudiki ari kuda madhirezi akasiyana siyana, shangu dzeballerina, mabhandi emusoro, uye clip. Fadza mwanakomana wako nekutora shangu dzemitambo, makuru maT-shirts, majuzi enhabvu uye zvimwe zvakawanda kubva kuchitoro chedu chepamhepo. Tarisa uone yedu mutsara wematoyi ayo iwe aunogona kugadzira ndangariro kuti uchengetedze. Runako runotanga pano - Unogona zvakare kuzorodza, kumutsidzira uye kuratidza rakajeka ganda nechero rako pachako, runako uye kushambadzira zvigadzirwa kubva kuWoopShop. Sipo dzedu, geji yekugezesa, makirimu ekuchengetedza ganda, mafuta, uye zvimwe zvigadzirwa zveayurvedic zvakagadzirirwa kugadzirisa mhedzisiro yekukwegura uye nekupa yakanakisa yekuchenesa ruzivo. Chengetedza ganda rako rakachena uye bvudzi rako uber-rakashongedzwa nema shampoo uye zvigadzirwa zvekuchengetedza bvudzi. Sarudza zvigadzirwa kuti uwedzere kunaka kwako .WoopShop ndeimwe yenzvimbo dzakanakisa dzekutenga pamhepo muIndia iyo inogona kubatsira kushandura nzvimbo dzako dzekugara zvachose. Wedzera ruvara nehunhu kumakamuri ako ekurara nemachira emubhedha nemaketeni. Shandisa smart tableware kufadza vashanyi vako. Kushongedzwa kwemadziro, mawachi, mapikicha emifananidzo, uye zvirimwa zvekugadzira zvine chokwadi chekufema hupenyu mukona chero ipi yeimba yako.Mutengo Unodhura paWako Matinji Tarisa uone vatsva vedu vanosvika kuti vaone zvipfeko zvemanjeje, shangu, uye zvishandiso mumusika. Iwe unogona kuisa maoko ako pane yakasarudzika fashoni mwaka wega wega mukupfeka. Iwe unogona zvakare kuwana yeakanakisa emadzinza mafashoni panguva dzese dzeIndia mhemberero. Une chokwadi chekufadzwa nemwaka wedu wekudzora pane shangu, mudhebhe, hembe, mabhegi uye zvimwe. Yekupedzisira-yemwaka-wekutengesa ndiyo yekupedzisira chiitiko kana fashoni ikawana isingatendeke inokwanisika.Shop Online paWoopShop Uine Kukwana KwakakwanaChimwe chikonzero nei WoopShop iri yakanakisa pazvitoro zvese zvepamhepo ndiko kuzara kwakakwana kwazvinopa. Iwe unogona kutarisa ako aunofarira mabhuru nemutengo sarudzo yezvakasiyana zvigadzirwa munzvimbo imwechete. Iyo yekushandisa-inoshamwaridzika interface inokutungamira iwe kuburikidza nesarudzo yako maitiro. Yakakwana saizi machati, ruzivo rwechigadzirwa uye yakakwira-resolution mifananidzo inokubatsira iwe kuita sarudzo dzakanakisisa dzekutenga. Iwe zvakare une rusununguko rwekusarudza yako ekubhadhara sarudzo, kungave kadhi kana mari-pane-kuendesa. Iyo 15-zuva inodzoka mutemo inokupa iwe yakawanda simba semutengi. Pamusoro pezvo, iyo yekuedza-uye-kutenga sarudzo yezvisarudzo zvigadzirwa inotora vatengi-hushamwari kune inotevera nhanho Nakidzwa nerunako-rusina ruzivo ruzivo paunotenga zvakanaka kubva kumba kwako kana kubasa kwako. Android | iOS
Machenda anotarisa isu 4.9 / 5 inotarisana neongororo dze 119370.